हाँसको छोयला, मेरो बायाँ फन्को र सुधीर शर्माको पुस्तक प्रयोगशाला ~ brazesh
केही समय अघि एक जना मित्रसंग मैले शंकर लामिछानेको एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तन प्याज सापटी लिएको थिएँ । अहिले फर्काउने बेला घरभरि धुइंधुइंती खोज्दा पनि त्यो पाइएन । विचार ठूलो भए पनि आकार सानो भएको र थोरै पृष्ठहरु भएको त्यो पुस्तक कुन कुनामा लुकेर बसेको हो भन्ने थाहा भएन । मित्रलाई नयाँ पुस्तक किनेर फर्काउँछु भनेर म त्यसको खोजीमा हिंडे । प्रदर्शनी मार्ग अवस्थित साझाको विक्री कक्षसम्म पुगेपछि अरु पनि केही किनांैला भन्ने विचार थियो । त्यही मौकामा जमलतिर गएर अरविन्द अडिगाको नयाँ पुस्तक लास्ट म्यान इन टावर पनि किन्नुपर्ला भन्ने मनाशय बनाएर म निस्केको थिएँ । उनले आफ्नो पहिलो पुस्तक ह्वाइट टाइगरका लागि बुकर्स पुरस्कार जितेका थिए र मलाई उनको लेखनशैली मन परेको थियो । दुःखको कुरो, मैले साझाको विक्री भण्डारमा लामिछानेको पुस्तक पाइनं । उनीहरुका लागि अलि बढी एब्स्ट्रयाक्ट भएको हुनाले हो कि, भृकुटीमण्डपका कतिपय पुस्तक पसलेहरुले त त्यसको नाम पनि सुनेका थिएनन् । अन्ततोगत्वा भोटाहिटीको कुनै पसलमा मैले अरु मोटा पुस्तकहरुका बीचमा च्यापिएर निस्सासिरहेका शंकर लामिछानेलाई भेटें । जम्मा पैंतीस रुपैंयामा उपलव्ध रहेछ उनको त्यो कृति । त्यही बेलामा मैले अरु केही वरिष्ठ साहित्यकारहरुका त्यस्तै बहुचर्चित र कालजयी पुस्तकहरु किनें । ती सबै पैंतीस रुपयाँदेखि नब्बेका हाराहारीमा उपलव्ध भए । थोरै पैसामा धेरै पुस्तकहरु किन्न पाउँदा एकातिर खुसी नलागेको त हैन, तर हाम्रा आफ्ना साहित्यकारका कृतिहरु त्यति सस्तोमा उपलव्ध भएकोमा एक प्रकारले मन खिन्न पनि भयो । पैंतीस रुप्याँमा त वेदप्रकाश शर्मा, जेम्स हेडली चेज र सुरेन्द्रमोहन पाठकजन्य लेखकका (यदि ती लेखक हुन् भने) बगम्फुसे उपन्यास पनि पाइँदैनन् । अलि गतिला र नाम चलेका विदेशी लेखकका पुस्तक किन्नेहरुले त त्यो भन्दा निकै नै महँगोमा किन्छन् । तर नेपाली पुस्तकहरु भने त्यति सुलभ दरमा उपलव्ध हुँदा पनि किन कम किन्छौं ? अहिले नेपाली पुस्तकका पाठकहरु बढेको अवस्थामा पनि पाँच वा दश हजार बिक्ने पुस्तक सर्वाधिक विक्री हुनेमा गनिन्छन् भने हामीले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । महँगो भनिएका नेपाली पुस्तकहरु पनि साधारणतया दुइ देखि चार सयका दरमा उपलव्ध हुन्छन् । तै पनि छातीमा हात राखेर सोचौं त हामी आफ्नो आवश्यक अनावश्यक खर्चको बजेटमा पुस्तकका लागि कति छुट्याउँछौं ? कुनै एक मित्रले धोबीचौरमा क्या गज्जवको हाँसको छोयला पाइँदो रहेछ भन्यो भने कहिले गएर त्यो चपाऊँ भन्ने हुटहुटी चल्न थाल्छ । त्यहाँ पुगेर दुइ सय रुप्याँ प्लेट पर्ने अतिप्रचारित त्यो छ्वेला नचप्काउन्जेल त्यो हुटहुटी शान्त हुँदैन । तर कसैले आफूले हालसालै पढेको कुनै पुस्तक साह्रै राम्रो रहेछ भन्यो भने त्यस्तो हुटहुटी किन हुँदैन ? हामी साहित्य र पुस्तकमा रुचि राख्ने रहेछौं भने त्यो मान्छेले त्यो पुस्तक कहिले पढिसक्छ र आफूलाई दिन्छ भनेर सम्म हामी साहित्य प्रति सदाशयता देखाउँछौं । कुनै लोकार्पणमा गएको बेला करबलले कुनै पुस्तक किन्नु पर्दा पनि साथीभाइसंग खाजा खाने जति पैसा खर्च भयो भने करंगको हाडसम्म चसक्क किन खोच्छ हामीलाई ? मानौं नेपाली साहित्य र पुस्तकहरु पढिदिएर हामी लेखक साहित्यकारहरुमाथि कुनै कृपा गरिदिन्छौं ।
Subhas Lamichhane September 25, 2013 at 5:23 PM
Price is no barrier when it comes to buying books if you are an avid reader. As you pointed out, old Nepali classics like चपाइएका अनुहार, शिरिषको फूल, घामका पाइला, एब्स्ट्राक्ट चिन्तन: प्याज come atafar lesser price. The cost of newer books have indeed gone up, but are still cheaper than their Western counterparts. If u r seriously longing for it, u can manage anyhow. When all other items have skyrocketed in their price, books can be no exception & we gotta cope up with it!! Anyway, enjoyed the article. Thanx.